Tanade-Weyne Oo Suuxdintii Uu 25-Ka Sanaddood Suuxsanaa Ka Soo Kacay!! – Codka Qaranka Tanadland
Tanade-Weyne Oo Suuxdintii Uu 25-Ka Sanaddood Suuxsanaa Ka Soo Kacay!!
Mudodii 14-ka sanaddood ahayd oo ay furayd warbaahinta ku hadashe afka umadda Tanadland ee (Tanadland.com), waxaan tolkay ku guubaabinahayey inay cadowga soojireenka ah ee Habar-majeerteen ay duulaan ku qaadaan. Islamarkaasna ay ka sifeeyaan gobalada Nugaal, Mudug iyo Bari. Tanade-Weyne waa umad balaaran oo sadexdaas gobol cirifyadooda iyo inta u dhexaysaba degan. Beelaha reer (Cali Khayr) tiro ahaan waa 1 milyan. beelha kale ee reer Tanadland na markay ugu yaraadaan waa 500, 000. Laakiin wax dadnimo iyo waxtar ah malaha. 25 kii sanadood ee ugu danbeeyeyna waxay ku jireen kooma xun oo ay la suuxsanaayeen.
60 kii sanadood ee ugu danbeeyey waxaa umadda reer Tanadland u kacay jiilal danbiileyaal ah, oo waxmagarato ah aana lahayn aragti dheer. Umada reer Tanadland waxaa u hano qaaday jiil dufeysan oo hawtalhamag ah, oo aan garanayn waxa la gudboon oo ay abaartoodu tahay. Reer Tanadland waxaa u hanoqaaday jiil looharo ah oo masuuliyad doodii gabay. Umadda Tanadland waxaa u kacay duul siloon oo aan shucuur gobeed iyo damiir aan lahayn. Qoonka reer Tanadland ee hada jooga, waa qoon doorsoomay oo aan meelna ka shabihin tafiirtoodii hore. Reer Tanadland waxaa ku batay dad dameeraha ka liita oo aad isleedahay “War waxaan ducufada ah ma waxaa loo abuuray in la adoonsado?”, ficilo la’aantooda iyo han yaridooda marka aad fiirisid. Umadda Tanadland waxaa u soo kacay dad aad moodid inay garac yihiin oo aan ka dhiidhiyayn gunimada tolkood isbadeen.
Umadda Tanade-weyne waxaa ka soo dhexbaxay qoon u sabab noqday inay gumowdo umadda Tanadland oo qaateyaal ah. Oo aan marna ka dhiidhiyin wax kasta oo xadgudub iyo xumaan ah oo lagu sameeyo. Umadda Tanadland umadihii qayrkood ahaa iyo qabiiladii yar-yaraaba waxay noqdeen dowlado calan leh. Maantay Soomaaliya umadda aan dowladgoboleed lahayn waa umad gumowdey. Umadda Tanadland waxaa gunimada baday oo ilaa iyo hada ay dowlad u noqon waayeen, waxa weeyey waxay noqdeen gun aan ceeb ka dhiidhiyin.
Han yaraanta iyo aragti gaabnida aan tolkay ku dhaliilahayo oo yax-yaxa iyo ceebta huwan, wax cidna ka qarsoon maaha ee waa wax sida dharaarta u cad. Beesha Harti si ay u baabi’iso sharafta iyo karaaamada umadda Tanade-weyne, waxay ka sameeyeen maamul kusheeg xaaraan ah 3-da gobol ee ay beelaha reer Tanadland degaan ee Nugaal, Mudug iyo Bari. Taas waxaa ka sii daran magaalada Gaalkacyo oo shacabka ugu badan ee ku nooli ay yihiin shacabka reer Tanadland. Beelaha reer Tanadland xataa waxay awoodiwaayeen inay magaalada ka samaystaan maamul u gaar ah, oo la mid ah maamulada beelaha Sacad iyo Habar-majeerteen ay magaalada Ku leeyihiin. Magaalada Garoowe oo dadka degan ay kala bar yihiin dadka reer Tanadland. Sida dadka reer Tanadland ee ku nool magaalada Gaalkacyo ayey magaalada ugu noolyihiin sidii dad la haysteyaal ah.
Shirka Dowlad U Samaynta Umadda Tanadland :-
Soomaalidu waxay tiraahdaa “Doqoni Calaf Ma’leh”. Sidaad la socotaan ayaamahaan magaalada Gaalkaco waxaa ku soo qul-qulaya ergooyin reer Tanadland ah oo ka qaybgelidoona shirka Gaalkacyo. Shirka ay iclaamiyeen isimada reer Tanadland ee uu hormuudka u yahaya isimka ugu da’aada weyn uguna waayo’aragsan, oo ah (Suldan Maxamed Suldaan Jaamac Suldaan Shire). Shirkaan waxaa lagu balamay in uu furmo taariikhdu marka ay tahay (14/09/2017). Shirka umadda Tanade-weyna natiijada ka soo bixidoontana maaha waxa shaki ku jira, oo waxaac laysku raacsanyahay in umadda Tanadland dawlad loogu dhiso.
Arinta kale oo shirka dowlad u samaynta umadda Tanadland bar-bar socota ayaa waxay tahay, in umadda reer Tanadland ay duulaan balaaran oo dabargoyn ah ay ku qaadaan gunta Habar-majeerteen. Shir layaab leh ayaa dhowaan ka dhacay caasimadda Gobalka Xariir ee Galdogob, oo looga codsaday beelaha reer (Ugaas Cismaan) ka koonfureed. Inaysan inta uu shirku ka qabsoomayo inysan wax gumaad ah ka geysan degaanada u dhexeeya Garoowe iyo Gaalkacyo oo beesha Habar-majeerteen dad aad u yari ay ka degaan.
Qiirada iyo ficilada tolkay ay maanta hayaan waxaan la rabey in subixii ay taariikhdu ahayd (15/09/2007) ay muujiyaan. Oo markii isaaq harti uu araxda ka kal jebiyey oo u ka dhigay wax firxaday, wax uu laayey iyo in uu qabsaday. Inay naagaha Habar-majeerteen ay duulaan ku ekeeyaan oo ay cidibtiraan. Falaakiin, waxaa ilaahay mahaddiis ah in sanadkii 2007-da maantay Habar-majeerteen ay 10 jeer ka tabar yartahay. Oo dagaaladii is xig-xigey iyo xasuuqa joogtada ah oo ku socda aad loogu wiiqay.
Waagii aan yaraa reer adeerkay iyo reer abtiyaashay oo ah cida reer (Ugaas Cismaan) waxaan ka maqlijirey iyaga oo ku faana in aan umadda reer Tanadland weligood aan dagaal goob qura looga adkaan. Oo ay weligood ahaanjireern umad fool-adag oo dagaalka burji u leh. Aniguna tolkay 12 dagaal baan ka feer dagaalamay waana an hubaa inay niman balaah yihiin, oo marka ay dagaal noqoto wax hor istaagikaraa aysan jirin. Mar kastana waxaan aaminsanaa in Habar-majeerteen duulaan qorshaysan lagu qaado oo laga takhaluso, bal inta aynaan maamul samaysan. Oo gobalada Nugaal, Bari iyo mudug Habar-majeerteen laga sifeeyo. Balse hada tolkay haduu talo ku qaatay in uu isagoo dowlad ah uu Habar-majeerteen duulaan cidibtir ah ku qaadahayo waa isla meeshii!!.
Beelaha (Cismaan Yuusuf) tan iyo intii isbahaysiga Hartiga ee ay Habar-majeerteen ku adeegato la sameeyey, waxay gobalka mudug ay siyaalo kala duwan ugaga dileen rag 700 oo nin ka badan. Dad kaas na badidooda dagaalo iyo shirqoolo bareero ah baa lagu laayey, walow ay jiraan rag aan badnayn oo shirqoolo qarsoon lagu khaarajiyey. Laakiin nimanka beesha (Muumin Aadan) oo shirqooladaas raga ku laayey marna qasadkoodu ma’uusan ahayn inay isqariyaan. Aniguna marna ma’aanan qarin jirin ee waa’an ku faanijirey. Ujeedada kalaiya oo xasuuqa joogtada ah loogu hayey Habar-majeerteen na waxay ahayd, in uu dagaal dhaco oo reer Tanadland suuxdinta nacasnimada ah ee ay la suuxsanyihiin laga toosiyo.
Laakiin nasiibdaro, Gunta Habar-majeerteen dagaalkii labada maalmood oo keliya ayey wax iska caabin ah ay sameeyeen. Markii dagaalka looga adkaaday oo lagu jebiyeyna waa’iyagii xoolaha baada ah bixiyey. Dagaalka ay u sababta ahaayeen dadka reer Tanadland na eediisii qaatay, si uu dagaalku u joogsado. Habar-majeerteen waxay nooga atkaatay nabadii, iyagoo aan dagaal nala gelin oo aan naga adkaan ayey intii aanu suuxsanayn ay dhulkeenii isasiiyeen. Oo Maamul ku sheeg ay ka samaysteen iyaga u gaar ah.
Weligey waxaan dadka reer Tanadland aan ka maqlijirey iyaga oo leh (Habar-majeerteen Waxay Nabad Kugu Yeesho Colaad Kuguma Yeesho”. Had haduu Tanade-weyne uu suuxdintii ka soo toosay uuna u diyaargaroobey in cayayaank Habar-majeerteen uu cidibtiro. Cayayaanka Habar-majeerteen waa la cidibtirayaa. Degaamada laysku hayana waxaa u haridoona umadda geesiyiinta ah ee reer Tanadland.
Halkani Waa Codka Wadaniga xalaasha Ah Ee Umadda Karaamaysan Ee Qaranka Tanadland, By: Saxardii Xareed Bulxan